မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: တောင်းပန်ခြင်း
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေပြီး ပို့စ်အသစ်တွေ တင်ချင်ပေမဲ့ စိတ်သွားတိုင်း စက်မပါတာကတကြောင်း(pc connection နှေးလို့ )ကြားဖြတ်အလုပ်တွေ လုပ်နေမိတာက တကြောင်းကြောင့် ပို့စ်အသစ်တွေ မတင်နိုင်သေးလို့ လာရောက်အားပေးဖတ်ရှုတဲ့ ညီမလေး လင်းလက် အပါအ၀င် ဘလော့ဂ် မိတ်ဆွေအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်ကွာMmblogbook အတွက်လဲ ဒီလ ၃၁၇က်နေ့ အမီ စာမူတွေ အပြီးဖတ်ပြီး recommend လုပ်ချင်တာကလဲ တရက်ကို အချိန် ၃၆နာရီ လောက် ရရင် ကောင်းမလားလို့ဖတ်နေတဲ့ ဘလော့ ဂ်တွေကတော့50 . ခွန်မောင်၏် ( ဖတ်ပြီး )51 . ကလိုစေးထူး ( ဖတ်ပြီး )52 . A place to say something ( ဖတ်ပြီး )53 . ကိုတိုးရဲ့ ( ဖတ်ပြီး )54 . စည်းအပြင်ကလူ ( ဖတ်ပြီး )55 . ကြယ် ( ဖတ်ပြီး )56 . the Myanmar Blues ( မဖတ်ရသေး )နောက်ရက်တွေကျ တ၀ကြီးတင်မယ်လေ။ ကဲ.. အဲဒီကြရင်တ၀ကြီးလာဖတ်နော်။